Amiirka cusub ee Alshabaab wuxuu qorsheynayaa inuu beegsado Uganda: Gen Katumba – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada dalka Uganda ayaa ka digay in hogaamiyaha cusub ee Alshabaab, Axmed Cumar ASbuu Cubeydah oo weeraro la beegsan doono dadka iyo Uganda, sida waxaa yiri taliyaha ciidamada Uganda Gen Katumba Wamala, oo wareysi siiyey wargeyska the The Observer UG.
Digniinta milateriga Uganda ayaa timid 10 maalmood kadib markii Mareykanku duqeyn ku dileen amiirkii Alshabaab, Abuu Zubeyr, islamarkaaa ururkaas 4-dii bishaan uu hogaamiye cusub u doortay Axmed Cumar Abuu Cubeydah.
“Weerarada argagixiso ee Alshabaab noogu geysan karaan Muqdisho iyo gudaha Uganda waa kuwo xaqiiqo ah, maxaa yeelay Alshabaab waxey ogyihiin inaan horseed u nahay awoodda looga qabsaday Buul Mareer, Kurtuwaareey iyo meelo kale oo Muqdisho u jira ilaa 120 KM” ayuu yiri Gen Katumba Wamala.
Gen Katumba ayaa sheegay in la wareegitaanka ciidamada Uganda ee Buul Mareer, Kurtuwaareey ee gobolka Shabeellaha Hoose uu Mareykanka u fududeeyey ogaashaha halka uu ku sugnaa hogaamiyaha Alshabaab ee duqeynta lagu dilay 1-dii bishaan September 2014.
Wuxuu sheegay Gen Katumba in inkastoo Alshabaab loo geystay jab oo laga qabsaday dhowr degmo, la dilay amiirkooda, haddana ay ka go’antahay iney u aargudaan hogaamiyahoodii la dilay.
8-dii bishaan Naftiis hure Alshaabaab ah ayaa gaari miinyesan la galay kolonyo ay wateen ciidamada AMISOM oo marayey deegaanka Xaawo Cabdi oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye. Qaraxyadaas waxaa ku dhintay ilaa 20 ruux oo 2 booliska Soomaaliya ka tirsanaayeen, halka dad kale raydi ahaayeen.
Alshabaab ayaa sheegatay weerarkaas waxeyna sidoo kale sheegeen in ku dileen 5 ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, islamarkaana ay waxyeello gaarsiiyeen saraakiil ajnabi ah oo la socday.
Ciidamada Uganda oo ay Soomaaliya ilaa 6000 askari ayaa taliyahoodu wuxuu sheegay iney dhawaan ku socdaan degmada Baraawe ee ku taalla xeebta Shabeellaha Hoose, islamarkaana Alshabaab u ah magaalo dhaqaale oo leh deked.